ओलीपथमा गण्डकी मुख्यमन्त्री गुरुङ, कहिलेसम्म सत्ता टिकाउलान् ? - Sankalpa Khabar
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफ्नो कुर्सी धर्मर भएपछि प्रतिनिधिसभा नै विघटन गरिदिए । साविकको नेकपाका ८३ सांसदले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने तयारी गरेसँगै उनले ‘न रहे बाँस, न बज्यो बाँसुरी’ भने जस्तै संसद् विघटन गरिदिए ।
ओलीको सो निर्णयको राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले तुरुन्तै स्वीकृत गरी वैशाख १७ र २७ मा निर्वाचन घोषणा गरिन् । तर, सर्वोच्च अदालतको फागुन ११ गतेको फैसलाले प्रतिनिधिसभा विघटन बदर गरिदियो । आफूले गरेको निर्णय बदर भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा दिनुपर्ने हो । तर, उनी अहिलेसम्म पदमै बसिरहेका छन् ।
ओली निकट प्रदेश मुख्यमन्त्रीहरूले पनि सोही प्रवृत्ति अवलम्बन गरेका छन् । आफूविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आएपछि प्रदेश १, बागमती र लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले चालू अधिवेशन नै अन्त्य गरिदिए । प्रदेश सभा बस्नै दिएनन् ।
अहिले त्यही अनुशरण गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले गरेका छन् । उनीविरुद्ध कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, राजमो र जसपाले आज प्रदेश सभा सचिवालयमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्दै थिए । तर, मुख्यमन्त्री गुरुङले सत्ता टिकाउन रातारात प्रदेशको चालू अधिवेशन नै अन्त्य गराइदिएका छन् ।
संघीय संसद् र प्रदेश संसदमा अब बजेट अधिवेशन सुरु हुँदैछ । त्यसैले अहिले आफ्नो कुर्सी जोगाउन गुरुङले प्रदेश सभाको चालू अधिवेशन अन्त्य गरे पनि कति समयसम्म जोगिएलान् ? भन्ने प्रश्न उब्जेको छ ।
केही दिनअघिसम्म उनले आफूविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भए त्यसको डटेर सामना गर्ने घोषणा गरेका थिए । तर, बुधबार चित्रबहादुर केसी नेतृत्वको राष्ट्रिय जनमोर्चाले गण्डकी प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन औपचारिक रूपमा फिर्ता लिएसँगै मुख्यमन्त्री गुरुङको हातखुट्टा लुलो भएको छ । अहिले उनी प्रदेशमा स्पष्ट अल्पमतमा छन् ।
ओलीले सपथ खानुअघि देउवा निवास पुगे प्रचण्ड र उपेन्द्र
३१ बैशाख १३:०३